Ukuphikiswa kwamagama kwi-Intanethi-Bala amagama | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuphikiswa kwamagama akwi-Intanethi-Bala amagama
Esi sixhobo silandelayo sivumela Bala inani lamagama kwisicatshulwa ngokukhawuleza nangokulula. Kufuneka ubhale isicatshulwa kule bhokisi ilandelayo kwaye ucofe iqhosha lokubala lamagama:
Akukho lubhaliso luyafuneka. Bala inani lamagama kwisicatshulwa kwimizuzwana embalwa enkosi ikhawuntara yamagama kwi-intanethi.
Njengokuba ibiluncedo, sinefayile ye- ikhawuntari yomlinganiswa okwi-intanethi.
1 Ulisebenzisa njani ikhawuntara yegama?
2 Kufuneka wenze ntoni ukuba ikhawuntara yamagama akwi-Intanethi ayindisebenzeli?
Ulisebenzisa njani ikhawuntara yegama?
Umsebenzi we isibali-magama Esikubonisa yona ilula kakhulu: kufuneka ukope kwaye uncamathisele okubhaliweyo kwibhokisi engentla, kwaye ucofe kwiqhosha lokubala.
Ngokukhawuleza, umyalezo uza kuvela kunye inani lamagama ewonke Inqaku lakho okanye okubhaliweyo okuqulathiweyo. Okona kulungileyo kuko konke akukho mda wegama, ukuze ubeke umxholo ixesha elide njengoko ufuna.
Ukuba ufuna ingcebiso, sicebisa ukuba ukope kwaye uncamathisele isicatshulwa ngemiyalelo eya kukhululeka kuwe: Ctrl + C (ukukopa isicatshulwa) kunye Ctrl+V (Ukuncamathisela isicatshulwa kwisixhobo sethu).
Kufuneka wenze ntoni ukuba ikhawuntara yamagama akwi-Intanethi ayindisebenzeli?
Kwimeko apho isixhobo singasebenzi njengoko kufanelekile, sinezinye iindlela ezahlukeneyo. Kodwa eyona nto siyithanda kakhulu kukusebenzisa iMicrosoft Word, apho ungabona khona ezantsi okanye ezantsi kwesixhobo, Inani lamagama oluqulathwe luxwebhu lwakho.
Nangona kunjalo, siqinisekile ukuba ngeli phepha uya kuba nayo yonke into oyifunayo ubale amagama akwixwebhu lakho, ke sikukhuthaza ngamandla ukuba uzame ukubanakho.
Oku kuluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukufikelela kumda wegama kwiphepha, i-TFG, uvavanyo lwesiNgesi, okanye eminye imisebenzi efuna ubuncinci bamagama ukuze yamkelwe. Enkosi kwisixhobo sethu, unokukufikelela kwimizuzwana embalwa.